Falanqeynta Kulanka Xiisaha Leh Ee Horyaalka La Liga Ee Kooxaha Barcelona v Granada. - jornalizem
Falanqeynta Kulanka Xiisaha Leh Ee Horyaalka La Liga Ee Kooxaha Barcelona v Granada.
Nyom, Lopez, Gomez, Siqueira�
Barcelona ayaa waxaa ka maqnaan doona kulanka ay caawa Camp Nou kula ciyaareyso kooxda Granada ciyaaryahan Gerard Pique.
Daafaca dhexe ee reer Spain ayaa dhaawac uu ka soo gaaray canqowga kulankii Champiosn League ee ay ka badiyeen Spartak Moscow, waxaana uu ku biirayaa kabtankiisa Carles Puyol oo jilibka ka dhaawacan iyo ciyaaryahanka khadka dhexe Andres Iniesta oo isna dhaawac la maqan.
Alex Song ayaa la filayaa inuu buuxin doono booska Pique, halka Jordi Alba isna la filayo inuu ku soo laaban doono line-upka kooxda ka dib markii uu ka soo kabsaday duray ku dhacay.
Weeraryahanada kooxda Granada Antonio Floro Flores iyo Darwin Machis ayaa la filayaa inay taam u yihiin safarka ay ku tagayaan Catalonia, inkastoo dhaawacyo yaryar ay ka soo gaareen kulankii ay barbaraha 1-1 la galeen kooxda Deportivo La Coruna.
Borja Gomez ayaa ka soo laabanaya ganaax lakiin Odion Ighalo, Fran Rico, Hassan Yebda, Manolo Lucena iyo Roberto ayaa dhamaantood seegaya kulankaan.
Barcelona ayaa badisay dhamaan afartii kulan ee ay ilaa iyo haatan ciyaartay La Liga, lakiin hal kulan kaliya ayay shabaqa ilaashadeen.
Seddexleey uu dhaliyay Lionel Messi ayaa kulankii xilli ciyaareedkii hore ee labadan kooxood ku dhexmaray waxa ay ku dhamaatay 5-3 oo ay ku badisay kooxda reer Catalan.
Ka dib labadiisii gool ee uu ka dhaliyay Spartak Moscow, Messi ayaa goolashiisa Champions League ee ka baxsan isreebreebka Champions League waxa uu ka dhigtay 53 gool, kaliya waxaa ka horeeya Andriy Shevchenko (59), Ruud van Nistelrooy (60) iyo Raul (71).
Granada ayaa weli baadigoob ugu jirta guushoodii ugu horeysay ee xilli ciyaareedkan, ka dib labo kulan oo ay barbaro galeen iyo labo kulan oo la garaacay.
Kooxda reer Andaluusiya ayaa badisay kaliya hal kulan 11kii kulan ee ugu danbeysay ee ay marti noqdaan La Liga.
Granada ayaa dhalisay kaliya hal gool lixdii kulan ee ugu danbeysay ee ay marti ahaayeen.